Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.6.2 Mangataka fangatahana
Mangataka fangatahana amin'ny fampiasana modely mandresy mba hampifangaroana ny angona fanadihadiana avy amin'ny olona vitsy miaraka amin'ny loharanom-baovao lehibe avy amin'ny olona maro.
Ny fomba hafa hampiarahana ny fanadihadiana sy loharanom-baovao lehibe dia dingana iray izay hiantso ny fanamafisana ny fangatahana . Ao anatin'ny fanamafisana ny fangatahana, misy mpikaroka iray dia mampiasa modely maminavina mba hampifangaroana antontam-baovao kely momba ny fanadihadiana miaraka amin'ny loharanom-baovao lehibe mba hahazoana tombanana amin'ny ambaratonga na granularité izay tsy mety amin'ny loharanom-baovao samihafa. Ohatra manan-danja amin'ny fanamafisana ny fangatahana dia avy amin'ny asan'i Joshua Blumenstock, izay te-hanangona angona izay afaka manampy amin'ny fitantanana ny fampandrosoana any amin'ny firenena mahantra. Taloha, ireo mpikaroka nangonin'ireto karazana tahirin-kevitra ireto dia tsy maintsy naka ny iray tamin'ireo fomba roa: fametrahana fanadihadiana na fanisam-bahoaka. Ny fandinihana ohatra, izay ahafahan'ny mpikaroka manadihady olona marobe, dia mety ho mavesa-danja, ara-potoana, ary mora kokoa. Na izany aza, ireo fanadihadiana ireo, satria mifototra amin'ny ohatra iray izy ireo, dia voafetra matetika amin'ny safidiny. Amin'ny fanadihadiana ohatra, dia sarotra be ny manao fanombanana momba ny faritra ara-jeografika manokana na ho an'ny vondrona demôkratika manokana. Ny fanisam-bahoaka, etsy ankilany, dia manandrana manadihady ny rehetra, ary noho izany dia azo ampiasaina izy ireo hamolavola tombana ho an'ny faritra kely na faritra ara-jeografika. Saingy ny vola dia matetika lafo sy mifototra (mifototra amin'ny fanontaniana kely fotsiny), ary tsy tonga ara-potoana (mitranga amin'ny fandaharam-potoana voafaritra, toy ny isaky ny folo taona) (Kish 1979) . Aza mifantoka amin'ny fanadihadiana sy fanisam-bahoaka samihafa, alao sary an-tsaina raha mety hampifangaro ny toetra tsara indrindra ny mpikaroka. Eritrereto raha afaka mametraka ny fanontaniana amin'ny olona tsirairay isan'andro ny mpikaroka. Mazava ho azy, io fanadihadiana manerana izao tontolo izao dia karazana fanjono fanta-daza. Saingy toa hita fa afaka manomboka manombantombana izany isika amin'ny fametrahana fanontaniana momba ny fanadihadiana avy amin'ny olona vitsy miaraka amin'ny marika nomerika avy amin'ny olona maro.
Ny fikarohana an'i Blumenstock dia nanomboka tamin'ny fikarakarany ny mpamatsy finday lehibe indrindra tao Rwanda, ary ny orinasa dia namoaka antontan-taratasim-bola tsy fantatra anarana avy amin'ny mpanjifa 1.5 tapitrisa teo anelanelan'ny taona 2005 sy 2009. Ireo rakitsoratra dia nahitana ny antsipiriany momba ny antso sy ny SMS rehetra, toy ny fotoana fanombohana, ny faharetany , ary ny toerana ara-jeografika misy ny mpandray sy ny mpandray. Alohan'ny hiresahako momba ny olana momba ny antontan'isa, ilaina ny manamarika fa ity dingana voalohany ity dia mety ho iray amin'ireo sarotra indrindra ho an'ny mpikaroka marobe. Araka ny voalazako ao amin'ny toko faha-2, ny loharanom-baovao lehibe indrindra dia tsy azo idirana amin'ny mpikaroka. Ny meta-data amin'ny finday manokana, indrindra indrindra, dia tena tsy azo idirana satria tsy azo atao ny manonona anarana ary azo antoka fa ahitana fanazavana izay heverin'ny mpandray anjara fa mety (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) . Amin'io tranga manokana io, ireo mpikaroka dia nitandrina mba hiaro ny angon-drakitra ary ny andraikiny dia natsangan'ny antoko fahatelo (izany hoe ny IRB). Hiverina any amin'ireto resaka etika ireto aho amin'ny antsipiriany ao amin'ny toko faha-6.
Ny Blumenstock dia liana tamin'ny fandrefesana ny harena sy ny fahalavorariana. Saingy ireo toetra ireo dia tsy mivantana ao anaty rakitsoratra antso. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy feno ireo rakitra an-tsoratra ireo amin'ity fikarohana ity - endri-tsarin'ny loharanom-baovao lehibe izay nodinihina tamin'ny antsipiriany tao amin'ny toko faha-2. Na izany aza, toa azo inoana fa ny fampahalalam-baovao dia mety hanana fampahalalana sasantsasany izay mety hanome vaovao tsy azo ampitahaina momba ny harena sy -panahy. Raha nanome io fepetra io, nanontany i Blumenstock raha azo atao ny mampiofana modely fianarana milina mba haminaniany ny mety ho fihetsiky ny olona iray amin'ny fanadihadiana mifototra amin'ny rakitsoratra antsoin'izy ireo. Raha azo atao izany, dia afaka mampiasa io modely io i Blumenstock mba haminavina ny valin'ny fanadihadiana amin'ireo mpanjifa 1.5 tapitrisa.
Mba hananganana sy hampiofanana modely toy izany, ny Blumenstock sy ireo mpikaroka avy ao amin'ny Kigali Institute of Science and Technology dia niantso ny santionany amin'ny mpanjifa iray arivo. Ireo mpikaroka dia nanazava ny tanjon'ilay tetikasa tamin'ireo mpandray anjara, nangataka ny faneken'izy ireo hampifandray ny valin'ny fanadihadiana amin'ny rakitsoratra antso, ary avy eo dia nanontany azy ireo fanontaniana maromaro mba handrefesana ny harenany sy ny fahalavorariany, toy ny hoe "Manana radio? "ary" Manana bisikileta ve ianao? "(jereo ny sary 3.14 ho an'ny lisitry ny ampahany). Ireo rehetra nandray anjara tamin'ilay fanadihadiana dia navoaka ara-bola.
Avy eo, nampiasa dingana roa dingana mahazatra amin'ny fampiofanana amin'ny milina i Blumenstock: sehatra fanaraha-maso arahin'ny fianarana voamarina. Voalohany, tao amin'ny dingana famolavolana fizika , ho an'ireo rehetra nadinadinina dia namerina ny rakitsoratra antsoina hoe Blumenstock ho toy ny karazana toetran'ny olona tsirairay; Ireo mpahay siansa momba ny angona dia mety hiantso ireo toetra ireo "endri-javatra" ary ny mpahay siansa sosialy dia nantsoina hoe "variables". Ohatra, ny olona tsirairay dia nanisa ny isan'ny andro maromaro miaraka amin'ny asa aman-draharahan'ny olona, ​​ny isan'ireo olona samihafa misy olona mifandray amin'ny ny vola lany amin'ny ora iray, sy ny sisa. Raha ny marina, ny fitaovana tsara dia mila fahalalana momba ny fikarohana. Ohatra, raha zava-dehibe ny manavaka ny fiantsoana an-tserasera sy iraisam-pirenena (mety hanantena ireo olona miantso ny firenena ho mpanankarena), dia tsy maintsy atao amin'ny sehatry ny engineering izany. Ny mpikaroka iray tsy mahatakatra ny momba an'i Rwanda dia mety tsy hampiditra io endri-javatra io, ary avy eo dia hipoitra ny fahatanterahan'ity modely ity.
Avy eo, tao amin'ny dingana fianarana voamarina, namorona modely i Blumenstock mba haminaniany ny valin'ny fanadihadiana ho an'ny olona tsirairay mifototra amin'ny endri-javatra. Amin'ity tranga ity, nampiasa ny logistic regression i Blumenstock, saingy afaka nampiasa fomba maro samihafa momba ny statistika na fitaovana fianarana.
Ka ahoana izany no niasa? Afaka naminavina ny valin'ny fanontaniana momba ny fanadihadiana toy ny hoe "Manana radio ve ianao?" Sy "Manana bisikileta ve ianao?", Araka ny nolazain'i Blumenstock. Mba hanombanana ny fanatontosana ny modely fanamelohany, nampiasa ny fanamafisam-peo momba ny fanavakavahana i Blumenstock, teknika izay matetika ampiasaina amin'ny siansa momba ny angon-drakitra, saingy mahalana amin'ny siansa sosialy. Ny tanjon'ny fanamarinana ifotony dia ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ity modely ity amin'ny alalan'ny fampiofanana azy io sy ny fitsapana azy amin'ny sehatra samihafa. Ny tena manokana, namakivaky ny rakitsorany i Flaprock 10 ka hatramin'ny 100 olona tsirairay. Avy eo dia nampiasainy sivy tamin'ireo tsangambato mba hampiofanana ny modely nomeny, ary ny vokatra azo avy amin'ny modely nampiofanina dia novaina tamin'ny tsipika sisa. Naveriny in-10 inefatra io fomba fanao io - miaraka amin'ny data isan-kerinandro ny famerenana ny toerany ho toy ny valim-panafahana - ary averina ny vokatra.
Ny fahamarinan'ny faminaniana dia ambony noho ny toetra sasany (3.14); Ohatra, afaka maminavina ny fahamarinan'ny 97.6% i Blumenstock raha misy olona manana radio. Mety hahatalanjona izany, saingy zava-dehibe foana ny mampitaha fomba fanao maminavina manohitra vahaolana tsotra. Amin'ity tranga ity, ny safidy tsotra dia ny maminavina fa ny tsirairay dia hanome ny valiny mahazatra indrindra. Ohatra, 97,3% n'ireo namaly no nitatitra fa nanana radio iray raha toa ka efa naminavina fa ny olona rehetra dia nitatitra fa hanana radio iray izay mety ho marina tokoa ny 97,3%, izay mahagaga fa mitovy amin'ny fahombiazan'ny fomba fitondrany (97.6% ny marina) . Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tahirin-tsarimihetsika rehetra sy ny fampiroboroboana dia nitombo ny fahamarinan'ny faminaniana avy amin'ny 97.3% hatramin'ny 97.6%. Na izany aza, ho an'ny fanontaniana hafa, toy ny hoe "Manana bisikileta ve ianao?", Dia nihatsara ny 54,1% hatramin'ny 67.6%. Amin'ny ankapobeny, ny endri-tsoratra 3.15 dia maneho fa ny toetra sasany dia tsy nanatsara zavatra betsaka mihoatra noho ny nanaovan'ny vorombola tsotra fotsiny ny volavolan-javamaniry, fa noho ny toetra hafa dia nisy fanatsarana kely ihany. Raha jerena fotsiny amin'ireo valiny ireo, dia mety tsy hieritreritra ianao fa ity fomba ity dia tena mampanantena.
Sary 3.14: Ny fahamendrehana ho an'ny modely statistika voaofana amin'ny rakitra an-tsoratra. Nifanaraka tamin'ny Blumenstock (2014) , latabatra 2.
Figure 3.15: Fampitahana ny mari-pahaizana amin'ny toetr'andro ho an'ny modely statistika voaofana miaraka amin'ny firaketana an-tsoratra amin'ny faminaniana tsotra. Ireo toerana dia somary jittered mba hisorohana ny fifampiraharahana. Nifanaraka tamin'ny Blumenstock (2014) , latabatra 2.
Na izany aza, herintaona monja taty aoriana, namoaka taratasy iray momba ny siansa i Blumenbock sy ireo mpiara-miasa aminy-Gabriela Cadamuro sy Robert On-tamin'ny Science sy ny vokatra tsara kokoa (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . Nisy antony roa fototra tena iankinan'ny fanatsarana ity: (1) nampiasa fomba fanao miavaka kokoa izy ireo (izany hoe fomba fanao vaovao hanehoana fanabeazana sy modely miavaka kokoa amin'ny faminavinana ny valinteny avy amin'ny endri-javatra) ary (2) fa tsy manandrana mamoaka ny valinteny ho an'ny olona Fanontaniana momba ny fanadihadiana (oh: "Manana radio ve ianao?"), nanandrana nanafoana singa manan-karena izy ireo. Ireo fanatsarana ara-teknika ireo dia midika fa afaka manao asa an-tery izy ireo amin'ny fampiasana rakitra an-tariby mba haminaniany ny harena ho an'ny olona ao amin'ny ohatra nasehony.
Ny famaritana ny harenan'ny olona ao amin'ny ohatra dia tsy ny tanjona farany indrindra amin'ny fikarohana. Tsarovy fa ny tanjona faratampony dia ny hampifangaro ny sasantsasany amin'ireo karazana tsara indrindra amin'ny fanadihadiana sy ny fanisam-bahoaka samihafa mba hanomezana tombam-bidy mazava sy avo lenta amin'ny fahantrana any amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana. Mba hanombanana ny fahaizan'izy ireo hanatratrarana io tanjona io, nampiasa ny modeliny sy ny angon-dry zareo i Blumenstock sy ireo mpiara-miasa mba haminaniany ny harenan'ny olona 1,5 tapitrisa ao amin'ny rakitsoratra antso. Ary nampiasa ny fampahalalana momba ny fampihorohoroana ao amin'ny rakitsoratra antso izy ireo (tsarovy fa ny angon-drakitra dia ahitana ny toerana misy ny tranokalan'ny sela akaiky indrindra ho an'ny fiantsoana tsirairay) mba hanombanana ny toerana misy ny toeran'ny tsirairay (3.17). Ny fametrahana ireo tombombarotra roa ireo, ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa dia nametraka ny tombantombana momba ny fizarana ara-jeografika ny harenan'ny mpanjifa amin'ny karajia tsara tarehy. Ohatra, azon'izy ireo atao ny manombatombana ny harena ankapobe ao amin'ny sela tsirairay ao Rwanda 2.114 (vondrona kely indrindra ao amin'ny firenena).
Manao ahoana ny fahasamihafan'ireo tombombarotra ireo raha oharina amin'ny haavon'ny fahantrana any amin'ireny faritra ireny? Alohan'ny hamaliako izany fanontaniana izany, te-hanantitrantitra aho fa misy antony marobe ny tsy mino. Ohatra, ny fahaiza-manao ny faminaniana amin'ny sehatra samihafa dia somary mitabataba (sary 3.17). Ary, angamba ny tena zava-dehibe, ireo olona manana finday dia mety tsy mitovy amin'ny olona tsy manana finday. Noho izany, mety haharitra noho ny karazana fandrakofana fandrakofana ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa izay nanosika ny fanadihadiana momba ny literatiora 1936 izay nofaritako teo aloha.
Mba hahalalantsika ny hatsaran'ny soso-kevitr'izy ireo dia mila ampitahaina amin'ny zavatra hafa ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa aminy. Soa ihany, nandritra ny fotoana nandalovan'ny fianarany, vondrona mpikaroka hafa no nanao fanadihadiana ara-tsosialy marobe tao Rwanda. Ity fanadihadiana hafa-izay anisan'ny fandaharam-pampianarana Demografia sy fahasalamana lehibe indrindra, dia nanana teti-bola lehibe ary nampiasa fomba mahazatra mahazatra. Noho izany dia azo heverina ho heverina ho toy ny volamena ny tombana azo avy amin'ny fanadihadiana avy amin'ny fanadihadiana momba ny demografika sy ny fahasalamana. Rehefa nampitahaina ireo tombana roa ireo, dia nitovitovy izy ireo (sary 3.17). Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny fampifangaroana antontan-kevitra vitsivitsy amin'ny fanadihadiana an-tariby, ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa dia afaka namorona fanombatombana azo ampitahaina amin'ireo izay avy amin'ny fomba maoderina volamena.
Ny fisalasalana dia mety mahita ny valiny ho fahadisoam-panantenana. Raha ny marina, fomba iray hijerena azy ireo dia ny filazàna fa amin'ny alalan'ny fampiasana angona lehibe sy ny fianarana milina, ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa dia afaka namorona tombanana izay mety ho azo itokisana kokoa amin'ny fomba efa misy. Saingy tsy mieritreritra aho fa izany no fomba tsara handinihana momba ity antony ity amin'ny antony roa. Voalohany, ny tombatombana avy amin'ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa dia teo amin'ny 10 heny haingana ary 50 isaky ny vidiny (rehefa milefa ny vidiny amin'ny vidiny). Araka ny efa noresahiko tato amin'ity toko ity, dia tsy miraharaha ny fandaniana ny mpikaroka. Amin'ity tranga ity, ohatra, ny fihenan'ny vidin'ny vola dia midika fa tsy hoe mihazakazaka isaky ny taona vitsivitsy - toy ny fenitra ho an'ny Fanadihadiana momba ny demografika sy ny fahasalamana - ity karazana fanadihadiana ity dia azo atao isam-bolana, izay mety hanome tombony maro ho an'ny mpikaroka sy ny politika mpamorona. Ny antony faharoa tsy tokony handraisana ny hevitry ny skeptic dia ity boky ity dia manome loharanom-bidy fototra azo isafidianana amin'ny toe-javatra maro samihafa. Ity fitaovana ity dia tsy misy afa-tsy zavatra roa sy dingana roa. Ny ingredients dia (1) loharanom-baovao lehibe izay malalaka fa matevina (izany hoe manana olona maro izy fa tsy ny fampahalalana ilainao momba ny olona tsirairay) ary (2) fanadihadiana iray izay ety fa matevina (izany hoe, olona vitsivitsy, saingy manana ny vaovao ilainao momba ireo olona ireo izany). Ireo fitaovana ireo dia mifangaro ao anaty dingana roa. Voalohany, ho an'ny olona ao amin'ny loharanom-baovao roa, dia manamboara modely fianarana milina mampiasa ny loharanom-baovao lehibe mba haminavina ny valin'ny fanadihadiana. Avy eo, ampiasao io modely io mba hamoahana ny valin'ny fanadihadiana ny olon-drehetra ao amin'ny loharanom-baovao lehibe. Noho izany, raha misy fanontaniana sasantsasany izay tianao hanontaniana olona marobe, mitadiava loharanom-baovao lehibe avy amin'ireo olona mety ampiasaina mba haminavinana ny valiny, na dia tsy miraharaha ny loharanom-baovao lehibe aza ianao . Izany hoe, Blumenstock sy ireo mpiara-miasa dia tsy niraharaha momba ny antso an-tariby; Izy ireo ihany no nikaroka ny rakitra an-telefaona satria azo ampiasaina izy ireo haminavina ny valin'ny fanadihadiana izay nokarakarainy. Io karazam-pahaizana manokana tsy miankina amin'ny loharanom-baovaon-drakitra io dia mahatonga ny fanamafisana ny fangatahana samihafa amin'ny fangatahana entina, izay noresahiko teo aloha.
Sary 3.16: Famaritana ny fandalinana nataon'i Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Ny rakitra an-tsoratra avy amin'ny orinasan-telefaona dia niova ho karazana laharana iray ho an'ny olona tsirairay sy tsanganana iray ho an'ny singa tsirairay (ie, variable). Avy eo, nanamboatra modely fianarana manara-maso ny mpikaroka mba haminavina ny valin'ny fanadihadiana avy amin'ilay matrice. Avy eo, ny modely fianarana voamarina dia nampiasaina mba handresen-dahatra ny valin'ny fanadihadiana ho an'ny mpanjifa 1.5 tapitrisa. Ny mpikaroka dia nanombana ihany koa ny toeram-ponenana sahabo ho 1.5 tapitrisa mpanjifa mifototra amin'ny toerana misy ny antso. Raha nampiarahina ireo tombony roa ireo-ny harena voajanahary sy ny toeram-ponenana voamarina - dia nitovitovy tamin'ny tombanana avy amin'ny fanadihadiana momba ny demografika sy ara-pahasalamana, ny fanadihadiana nentim-paharazana volamena (endrika 3.17).
Sary 3.17: Ny vokatra avy amin'ny Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Tao amin'ny ambaratonga samihafa, afaka nanao asa azo itokisana ireo mpikaroka tamin'ny faminaniany ny harenan'ny olona avy amin'ny rakitsoratra antsoin'izy ireo. Ny fanombantombanana ny harenan'ny distrika ho an'ny distrika 30 ao Rwanda - izay mifototra amin'ny tomban'ezaka momba ny harena sy ny toeram-ponenana - dia nitovitovy tamin'ny vokatry ny fanadihadiana momba ny demografika sy ny fahasalamana, fanadihadiana nentim-paharazana volamena. Nifanaraka tamin'ny Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) , tarehimarika 1a sy 3c.
Ho famintinana, ny fangatahan'i Blumenstock dia nanamora ny fangataham-panadihadiana niaraka tamin'ny loharanom-baovao lehibe iray mba hamokarana tombanana azo oharina amin'ireo avy amin'ny fanadihadiana lò-standard. Io ohatra manokana io ihany koa dia manazava ny sasany amin'ireo fifanakalozan-kevitra momba ny fanamafisana ny fangatahana sy ny fomba fanadihadiana nentim-paharazana. Ny fanombantombanana ny fanombatombana nangataka dia mora kokoa, mora kokoa, ary lehibe kokoa. Saingy, etsy ankilany, mbola tsy misy fototra ara-toekarena mahery vaika amin'ity karazana fangatahana ity. Ity ohatra tokana ity dia tsy mampiseho rehefa miasa izany ary rehefa tsy hitranga izany, ary ny mpikaroka izay mampiasa ity fomba ity dia mila manahy indrindra momba ny mety ho fisian'ny voka-dratsin'ny otrik'aretina - ary izay tsy tafiditra ao anaty loharanom-baovao lehibe. Ankoatra izany, ny fomba fanamafisana ny fanamafisana dia tsy mbola manana fomba tsara hampifandanjana ny tsy fahazoana antoka manodidina ny tombantombany. Soa ihany, ny fangatahana mitombo dia manana fifandraisana lalina amin'ireo sehatra telo lehibe amin'ny antontan'isa-tombanana kely (Rao and Molina 2015) , ny fanombohana (Rubin 2004) , ary ny mari-pamantaran-tariby mifototra amin'ny model (izay mifandray akaiky amin'i Mr. P., ny fomba ambarako mialoha ao amin'ny toko) (Little 1993) . Noho ireo fifandraisana lalina ireo, dia manantena aho fa ho maro ny fomba amam-pahaizana fototra amin'ny fangatahana hamafisina tsy ho ela.
Farany, mampitaha lesona manan-danja momba ny fikarohana ara-tsosialy dizitaly ny fampitahana ny fanandramana voalohany sy faharoa nataon'i Blumenstock: ny fiandohana dia tsy ny fiafarana. Izany hoe, matetika, ny fomba fiasa voalohany dia tsy ho tsara indrindra, fa raha manohy miasa ny mpikaroka, dia ho tsara kokoa ny zavatra. Amin'ny ankapobeny, rehefa mandinika ny fomba fikarohana vaovao amin'ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika, dia zava-dehibe ny fanaovana fanombanana roa samihafa: (1) Manao ahoana izao ny asa atao izao? ary (2) Ho tsara ve ity asa ity amin'ny hoavy raha miova ny fiovaovan'ny toetrandro ary toy ny mpikaroka manolotra bebe kokoa ny olana? Na dia nampiofanina hanao ny karazana fanombanana voalohany aza ireo mpikaroka, dia matetika no zava-dehibe kokoa ny faharoa.